फोन हरायो? गुगल गर्नुस्.. | धादिङ सेरोफेरो : Dhading Serofero - latest news of dhading
Home ह्याकिंग फोन हरायो? गुगल गर्नुस्..
फोन हरायो? गुगल गर्नुस्..
2:21:00 PM ह्याकिंग
गुगलको 'एन्ड्रोइड डिभाइस म्यानेजर' ले तपाईको फोनको 'लोकेसन' भनिदिन्छ। 'एन्ड्रोइड डिभाइस म्यानेजर' को यही फिचर अब सिधै गुगल सर्चमा उपलब्ध भएको गुगल'लेगुगलप्लस मार्फत जनाएकोछ। गुगलमा गएर 'find my phone' टाइप गरेपछि, अब फोनको लोकेसन सिधै सर्च रिजल्ट पेजको माथिल्लो भागमा देखिन्छ। घरमै छ भने त घन्टी बजाउन पनि सकियो, फोन 'साइलेन्ट' मोडमा भएपनि, गुगलबाट फोन गर्दा चर्को आवाजले घन्टी बज्छ।